2017 – MyOpenAds
YYear: December 6, 2017
MyOpenAds ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး Online Ad Network တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Website ပေါင်းများစွာတွင် ကြော်ငြာများကို တစ်နေရာတည်းကနေ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သော One Stop Ads Network တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံး Online Ad Network ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့လဲ? မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူသိများပြီး အကျော်ကြားဆုံး Website ပေါင်း ၃၀ ကျော်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ လူသိများပြီး ကျော်ကြားတဲ့ Website တွေက ဘယ်သူတွေလဲ? လူသိများ ကျော်ကြားတဲ့ Website တွေကတော့ Eleven, 7Day, Myanmar Times, Mizzima, ThitHtooLwin, DVB, The Voice […]
Most people consume content online nowadays. In order to better reach and engage today’s digital consumers, marketers need to be aware of premium online ad formats, such as interstitial, native, banner ads and other best performance ad formats. That’s why, publisher also need to appeal the brand advertisers and they should try new ad formats […]
There are several ways that you could make to increase your website traffic. Here are some points that you should do to increase your traffic. Consistently produce quality content Asablog you ideally need to be postingaminimum of5articlesaday of relevant and valuable content for your target audience. […]
တွေ့ဖူးသမျှ Client တွေကြား အမေးအများဆုံးဖြစ်သလို မေးပြီးရင်လည်း ထပ်ထပ်မေးနေကြတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါ။ Client တွေဆိုတာထားဦး….. ဒီ Field ထဲမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ Old Service တွေတောင် ရောချင်ချင်ရယ်…… သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဆို အခုထိ ပြန်ပြန်ရှင်းပြနေရတုန်း….. ကိုယ်ပဲရှင်းမပြတက်တာလား….. သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကပဲ မှတ်ဖို့ခက်တာလား……. သူတို့ကပဲ မေးပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ထားလိုက်ကြတာလား….. ဘာကြောင့်လဲတော့မသိပေမယ့် ခဏ ခဏတော့ မေးကြပါတယ်။ ကဲ… ဒါထားပါလေ….. မူရင်းလမ်းကြောင်းကို ပြန်သွားပါမယ်….. Impression ဆိုတာကတော့ ကြော်ငြာတစ်ခုကို User (သို့မဟုတ်) Device အရေအတွက် ဘယ်လောက်ကိုဖြစ်စေ ပြပြီးခဲ့တဲ့ စုစုပေါင်းအကြိမ်အရေအတွက်ပါ။ User တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ အဆိုပါကြော်ငြာကို ပြပြီးပြီး မပြီးပြီး တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြနိုင်ပြီး ကြော်ငြာကို တစ်ကြိမ်ပြရင် Impression တစ်ကြိမ်၊ […]